Ronaldo oo raacay wadadii Messi kadib markii Xulka Portuqal 2-1 loogaga badiyay +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Ronaldo oo raacay wadadii Messi kadib markii Xulka Portuqal 2-1 loogaga badiyay +SAWIRRO
Xulka qaranka Uruguay ayaa u soo baxay siddeed dhamaadka koobka aduunka kadib markii ay 2-1 ku garaaceen Portugal. Cavani ayaaa noqday geesiga Uruguay soo dhaafiyay imtixaankii Portugal kadib markii uu dhaliyay laba gool oo cajiib ah balse qaybtii labaad Cavani ayaa dhaawc ciyaarta looga saaray.
Pepe ayaa mar u muuqday in uu Portugal ciyaarta dib ugu soo celiyay isaga oo dhaliyay goolka rajadood soo noolayay laakiin Cavani ayaa markiiba Uruguay u keenay goolka labaad ee ay guusha ku gaadheen.
Cristiano Ronaldo ayaa isna la mariyay dariiqii Lionel Messi iyada oo labadii xidig ee aduunka ugu fiicnaa isla saacado gudahood koobka aduunka looga reebay. Uruguay ayaa siddeed dhamaadka la ciyaari doonta France oo Argentina soo reebay.
Kaydka: Anthony Lopes, Beto, Cedric Soares, Mario Rui, Manuel Fernandes, Ricardo Quaresma, Andre Silva, Gelson Martins, Joao Moutinho, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bruno Alves.
Kaydka: Martin Campana, Martin Silva, Maxi Pereira, Cristhian Stuani, Carlos Sanchez, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Sebastian Coates, Gaston Silva, Jonathan Urretaviscaya, Cristian Rodriguez, Maxi Gomez.
DAQIIQADII 7 AAD Xulka qaranka Uruguay ayaa gool cajiib ah la yimid kadib markii uu Edinson Cavani uu si layaableh u maamulay kubbad caawin uu Luis Suarez meel fog ka soo sameeyay wuxuuna Cavani xulkiisa siiyay fursada ay xili horeba Portugal xaalada ugu xumeeyeen waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Uruguay hogaanka kula wareegtay.
Markii afraad ee ay Luis Suarez iyo Cavani koobab aduun sidan oo kale iskugu xidhmeen oo ay goolal iskaga caawiyeen waxayna sheekadan soo wadeen tan iyo sanadkii 2010 kii markii koobka aduunka South Afrika lagu qabtay.
Portugal ayaa wax walba u sameeyay in ay ciyaarta dib ugu soo laabtaan qaybtii hore ee kulankan laakiin difaaca xadiidka ah ee aan ilaa hadda koobka aduunka goolal looga soo dhalin ee Uruguay ayaa xadiday saaamyntii Ronaldo iyo weerarka Portugal.
Xaalada ciyaarta ayaa ahayd mid aad u dag iyada oo Uruguay raadinaysay goolka labaad si ay guusha ugu dhawaan karaan balse labada dhinac waxay ciyaartu noqotay mid aan sahlanayn oo gool dhalin fiican lahayn.
XOGTII CIYAARTA EE LABADA XUL QAYBTII HORE LOO DIWAAN GALIYAY:
Xulka qaranka Portugal ayaa ahaa kubbada boosishanka ciyaarta ee ugu badan haysta iyaga oo lahaa boqolkiiba 64% halka Uruguay ay haysteen boqolkiiba 36% sidoo kale xulka qaranka Portugal ayaa isk
dhiibtay 258 baas qaybtii hore ee kulankan halka ciyaartoyda Uruguay ay kubbada isku dhiibteen 145 jeer oo kaliya.
Dhinaca darbooyinka labada xul qaran ayaa iskaga mid ahaa bartilmaameedka goolka iyo waliba darbooyinka aan baril tilmaameedkooda helin. Portugal ayaa 4 jeer darbo ku tuurtay goolka Uruguay laba kamid ahi banaanka ayay mareen halka laba kale ay goolka u tageen waxayna ku fashilmeen in ay wax goolal ah dhaliyaan qaybtii hore.
Sidoo kale Uruguay ayaa 4 darbo ku gantay goolka Portugal iyada oo laba ka mid ahi banaanka mareen isla markaana laba ka mid ahi ay goolka toos ugu toogteen waxaana ka mid ahaa goolka uu Cavani ku dhaliyay caawintii Suarez.
Si kastaba ha ahaatee, qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay Uruguay oo 1-0 hogaanka ciyaarta ku haysay isla markaana wali sii joogtaysay in aan hal gool looga dhalin koobka aduunka inkasta oo ay kulankii afraad qaybtiisii labaad dhamaysteen.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu Portugal ciyaarta soo galay isaga oo u dhaarsan in ay ciyaarta dib gu soo laabtaan waxayna markiiba bilaabeen sidii ay ku gaadhi lahaayeen shabaqa Uruguay halka xulka Uruguay ay raadinayeen fursadii ay hogaanka ku sii xejisan lahaayeen.
DAQIIQADII 55 aad Xulka qaranka Portugal oo cadaadis badan ku hayay difaaca Uruguay ayaa ugu danbayn ciyaarta ku soo laabtay kadib markii uu Pepe qaab qurux badan madaxa ugu dhaliyay goolka xulkiisa Portugal sida wayn ugu baahnaa iyada oo Raphaël Guerreiro oo uu caawin ka soo sameeyay kubbad uu koorne ka soo tuuray waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Goolkan ayaa ahaa goolkii ugu horeeyay ee xulka qaranka Uruguay looga dhaliyay koobka aduunka Russia 2018 waxayna soo muujiyeen sida ay u haystaan difaaca ugu fiican sanadkan.
Portugal ayaa markan helay kalsooni ay ciyaarta dhinaca kale ugu dhigi kareen waxayna bilaabeen duufaano weeraro ah oo ay ku raadinayeen goolka labaad si ay markooda ciyaarta ay hogaanka ugu qabteen.
DAQIIQADII 62 aad Alla muxuu gool ahaa!! Uruguay ayaa si layaableh iskaga dul qaaday culays waali ah oo ka haysatay weerarka Portugal waxaana si aan la qiyaasi karin goolkan u dhaliyay Edinson Cavani ayaa kaas oo markale neefta dib ugu celiyay Portugal kadib markii uu caawin fiican ka helay Bentancur waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay Uruguay hogaanka ciyaarta ku soo ceshatay.
Xamaasada ciyaarta ayaa noqotay mid waali ah iyada oo Portugal lagu qasbay inay markii labaad raadiyaan goolka barbaraha. Daqiiqadii 65 aad tababaraha Portugal ayaa ciyaarta ka saaray Adrien Silva wuxuuna kaydka uga yeedhay xidiga khibrada badan ee Ricardo Quaresma.
DAQIIQADII 70 AAD Portugal ayaa helay fursad dahabi ah oo goolka oo madhan uu Muslera kubbad ka baxsatay ku dhex tuuray xerada ganaaxa cidhifkeeda wuxuuna ka soo baxsanaa goolkiisa inkasta oo ciyaartoy Portugal ah uu qalad kala kulmay haddana garsooraha ayaan waxba tilmaamin laakiin ma rumyasan kartid in Bernardo Silva uu goolka oo madhan uu darbo uu dul mariyay.
DAQIIQADII 74 AAD Fernando Santos ayaa markale shaxdiisa isbadal ku sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Gonçalo Guedes wuxuuna ciyaarta soo galayay André Silva waxayna markan Uruguay ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy iyada oo Cavani uu dhaawac soo gaadhay.
DAQIIQADII 74 AAD Uruguay ayaa xaqiijisatay in Cavani aanu ciyaarta ku laaban karin waxaana kaydka laga soo kiciyay Stuani waxayna Portugal markan bilaabeen in ay goolka barbaraha ee labaad raadiyaan.
Intaa wixii ka danbeeyay ciyaartu waxay noqotay Portugal oo wixii ay awood lahayd weerarka galisay iyo Uruguay oo difaacasho cajiib ah ugu jawaabtay waxaana jiray fursado joogto ah oo ay Portugal abuurayeen.
Waqtigii rasmiga ahaa 90 ka daqiiqo ee ciyaarta ayaa ku dhamaaday 2-1 ay wali Uruguay hogaanka ciyaarta ku hayso laakiin garsooraha afraad ayaa tilmaamay 4 daqiiqo oo dheeraad ah wuxuuna ahaa waqtiga Portugal ka xigay in ay koobka aduunka ka hadhaan ama ay xaalada badalaan.
Portugal ayaa nafta iskugu keentay Uruguay afartii daqiiqo ee dheeriga ahaa laakiin haddana waxay ugu danbayn ku fashilmeen in ay goolka barbaraha keensadaan si ay waqti dheeri ah ciyaarta ugu dari karaan waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 2-1 ay Uruguay guul ku gaadhay isla markaana ay Portugal kaga cidhibtirtay koobkan.
Cavani ayaa sabab buuxda u noqday in riyadii koobka aduunka ee Cristiano Ronaldo iyo xulka qarankiisa Portugal ay si xun u soo dhamaatay iyada oo Ronaldo uu qaatay habeen ay tahay in uu iska ilaawo. Labadii xidig ee aduunka ugu fiicnaa ee Ronaldo iyo Messi ayaa saacado gudahood koobka aduunka looga reebay.